Allegra vs Allegra-D: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe - Iziyobisi Vs. Umhlobo | Eyenkanga 2021
Ulwazi Lweziyobisi Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Imidlalo Enzima Ukuzonwabisa Inkampani, Iindaba Impilo-Ntle Inkampani, Ukuphuma Iindaba Ekuhlaleni Cinezela Imidlalo Izilwanyana Zasekhaya Imfundo Yezempilo, Iindaba Ukuphuma Impilo
Eyona >> Iziyobisi Vs. Umhlobo >> I-Allegra vs Allegra-D: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
Ukujonga ngokubanzi iziyobisi kunye nolwahluko ophambili | Imiqathango inyangwa | Ukusebenza | Ukuhlawulwa kwe-inshurensi kunye nokuthelekiswa kweendleko | Imiphumela | Ukusebenzisana kweziyobisi | Izilumkiso | FAQ
Ngelixa uthenga amayeza e-aleji kwikhemesti yakho yasekuhlaleni unokufikelela kwi-Allegra (fexofenadine). I-Allegra ikhulula iimpawu zokungabikho komzimba ezifana nokuthimla kunye nokurhawuzelela. Yindlela ethandwayo ye-counter-the-counter (OTC) ukuba ujonga ukukhululeka ngokukhawuleza. Kodwa, unokuqaphela ukuba kukho iinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo: IAlegra kunye neAllegra-D.
I-Allegra, okanye i-fexofenadine, yi-antihistamine evunyiweyo ye-FDA esetyenziselwa ukunyanga ii-aleji zonyaka. Ngokukodwa, i-fexofenadine yi i-antihistamine yesizukulwana sesibini ezinokuthi zinciphise iimpawu ezinje ngokuthimla, ukuphuma kwempumlo, kunye nokurhawuzela, amehlo anamanzi. Isebenza ngokuthintela i-histamine yemichiza ekubophelelweni ukuya kwii-histamine receptors, ezithintela ukuphendula komzimba.
Funda ngokufunda ngakumbi ngumahluko kunye nokufana phakathi kweAllegra kunye neAllegra-D.
Nguwuphi umahluko ophambili phakathi kweAllegra kunye neAllegra-D?
Unokucinga ukuba ziyafana ngokufanayo kuba kukho umahluko omnye wonobumba omnye, nangona kunjalo, nangona zombini iinguqulelo zeAllegra ziqulathe i-fexofenadine, zinomahluko obalulekileyo: I-Allegra-D iqulethe into yokuthambisa ebizwa ngokuba yi-pseudoephedrine. I-Pseudoephedrine ihlala ithathwa ukunciphisa ukuxinana kwempumlo, okanye impumlo exineneyo, enxulunyaniswa nokwaliwa okanye ukubanda okuqhelekileyo.
I-Allegra-D (Yintoni i-Allegra-D?) Iza ngethebhulethi yeeyure ezili-12 kunye neeyure ezingama-24. Ukuqulunqwa kweeyure ezili-12 kuqulethe i-60 mg ye-fexofenadine kunye ne-120 mg ye-pseudoephedrine ngelixa ukwenziwa kweeyure ezingama-24 kuqulethe i-180 mg ye-fexofenadine kunye ne-240 mg ye-pseudoephedrine. I-Allegra-D icetyiswa kuphela kubantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka eli-12 ubudala okanye ngaphezulu.
I-Allegra yesiqhelo (Yintoni iAllegra?) Iza kwithebhulethi yomlomo, ithebhulethi yokuqhekeza ngomlomo, kunye nokumiswa kolwelo. Ithebhulethi yeeyure ezili-12 iqulethe i-60 mg ye-fexofenadine ngelixa i-24-iiyure zine-180 mg ye-fexofenadine. Abantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka eli-12 ubudala nangaphezulu banokuthatha iipilisi zeAllegra, kodwa kukho iinguqulelo zamandla asezantsi ezikhoyo zokunyanga nokuthimliswa negazi ebantwaneni Iminyaka emi-2 ukuya kweli-11 ubudala.
Umahluko ophambili phakathi kweAllegra kunye neAllegra-D
Iklasi yeziyobisi Antihistamine Antihistamine
Uhlobo lweBrith / generic Brand kunye generic ziyafumaneka Brand kunye generic ziyafumaneka
Ngubani igama eliqhelekileyo?
I-Fexofenadine I-Fexofenadine kunye ne-pseudoephedrine
Zeziphi iifom eza nalo iziyobisi? Ithebhulethi yomlomo
Ithebhulethi yokuqhekeka ngomlomo
Ulwelo lomlomo Ithebhulethi yomlomo, ukukhutshwa okwandisiweyo
Ithini idosi esemgangathweni? Ithebhulethi ye-30 mg: Ithebhulethi enye ngomlomo kabini imihla ngemihla
60 mg ithebhulethi: Ithebhulethi enye ngomlomo kabini yonke imihla
Ipilisi ye-180 mg: Ithebhulethi enye ngomlomo kube kanye yonke imihla Ithebhulethi yeeyure ezili-12: Ithebhulethi enye ngomlomo kabini imihla ngemihla
Ithebhulethi yeeyure ezingama-24: Ithebhulethi enye ngomlomo kube kanye yonke imihla
Lude kangakanani unyango oluqhelekileyo? Ixesha elifutshane Ixesha elifutshane
Ngubani oqhelekileyo usebenzisa amayeza? Abantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka eli-12 nangaphezulu Abantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka eli-12 nangaphezulu
Iimeko eziphathwe nguAllegra kunye neAllegra-D
I-Allegra kunye ne-Allegra-D ngamayeza anyanga asetyenziselwa ukunyanga i-rhinitis yamaxesha athile-ekwabizwa ngokuba yi-hay fever-kubantu abadala nasebantwaneni. Zingaba ziziyobisi ezifanelekileyo xa ufumana iimpawu emva kokuvezwa kwizilwanyana ezinjenge-pollen okanye izilwanyana ezinothuli.
I-Allegra ikwavunyiwe ukuba inyange imihlathi, okanye i-urticaria. Abantu abaninzi baqhekeka kwimingxunya emva kokufumana into ebangelwa kukungavisisani nokutya okuthile okanye iziyobisi. I-Allegra inokunyanga i-urticaria engapheliyo ebantwaneni ukuya kwiinyanga ezi-6 ubudala.
Imeko Allegra I-Allegra-D
Rhinitis yamaxesha athile Ewe Ewe
Imihlathi Ewe Hayi
Ngaba i-Allegra okanye i-Allegra-D iyasebenza ngakumbi?
Zombini i-Allegra kunye ne-Allegra-D ngamayeza asebenzayo kunyango lweempawu zokungabikho komzimba. Nangona kunjalo, i-Allegra-D ilunge ngakumbi ekunciphiseni ukuxinana kunye noxinzelelo lwe-sinus ngenxa ye-pseudoephedrine eyongeziweyo. Okwangoku, akukho zilingo zentloko xa kuthelekiswa neAllegra kunye neAllegra-D.
Xa kuthelekiswa ne-antihistamines yesizukulwane sokuqala njengeBenadryl (diphenhydramine), iAllegra ineziphumo ebezingalindelekanga kangako. Kule meko, iAllegra inokuba njalo ithathwa njengekhuselekileyo kune antihistamines ezindala.
Ngokwe- uphononongo I-antihistamines yesizukulwana sesibini, i-Allegra yafunyanwa ithelekiswa neziyobisi ezinje ngeZyrtec (cetirizine) kunye neClaritin (loratadine) yokunyanga i-allergen rhinitis. Kodwa, iZyrtec inokusebenza ngakumbi kune-Allegra yokunyanga iinyosi.
Inkqubo ye- iyeza elifanelekileyo lokunyanga yeyona isebenza kakuhle kuwe kunye neempawu zakho ezithile. Nxibelelana nomboneleli wakho wezempilo ukuze ufumane elona yeza lisebenzayo lokungezwani nokwaliwa. Elinye ichiza linokuba ngcono ngokuxhomekeke kubume bempilo yakho kunye nezinye iziyobisi onokuthi uzithathe.
Umyinge kunye nokuthelekiswa kweendleko zeAllegra vs Allegra-D
I-Allegra kunye ne-Allegra-D ngamayeza e-over-the-counter (OTC) angahlali egutyungelwe yi-Medicare kunye nezicwangciso zeinshurensi. Iindleko zentengiso yeAllegra zihlala zijikeleza i-15 ukuya kwi-90 yeedola, kuxhomekeke kumandla kunye nobungakanani beetafile. Ukuba uneyeza likagqirha, unokufumana i-generic Allegra okanye iAllegra-D malunga ne- $ 10 kunye ne- $ 15 ngokwahlukeneyo. Jonga isixhobo sokukhangela i-SingleCare ukufumana ukuba ungagcina malini kwikhemesti yakho yendawo.
Ngokuqhelekileyo ihlawulwa yi-inshurensi? Hayi Hayi
Umthamo osemgangathweni I-180 mg tablet kanye ngosuku I-180 mg-240 mg tablet kanye yonke imihla
I-Medicare copay eqhelekileyo Iidola 1- $ 11 $ 1- $ 53
Ixabiso elilodwa $ 9 + $ 15 +
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zeAllegra vs Allegra-D
Iziphumo ebezingalindelekanga ezixhaphakileyo zeAllegra kunye neAllegra-D zibandakanya intloko ebuhlungu, isicaphucaphu, ukozela, ukungaginyisi mathe, kunye nosulelo oluphezulu lokuphefumla. I-Allegra nayo inokubangela iintlungu zokuya exesheni (idysmenorrhea).
Iziphumo ebezingalindelekanga ezithile kwiAllegra-D zibandakanya ukulala, umlomo owomileyo, ukubetha kwentliziyo kunye novalo. Ezi ziphumo zizodwa zibangelwa yipseudoephedrine kwiAllegra-D.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu zeAllegra zinqabile kodwa ngokubanzi kubandakanya ukusabela kobuntununtunu kwizithako ezikwichiza. I-pseudoephedrine e-Allegra-D inokubangela ukubetha kakhulu okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu, olunokuthi lunyanzelise unyango kwabo baneengxaki zentliziyo.
Allegra UAllegra D
Imiphumela Iyasebenza? Rhoqo Iyasebenza? Rhoqo
Intloko ebuhlungu Ewe 10.6% Ewe 13%
Ukuphuthelwa Hayi - Ewe 13%
Usulelo oluphezulu lokuphefumula Ewe 3.2% Ewe 1.4%
Isicaphucaphu Ewe 1.6% Ewe 7.4%
Idysmenorrhea Ewe 1.5% Hayi -
Ukozela Ewe 1.3% Ewe *
Ukutya Ewe 1.3% Ewe 2.8%
Umlomo owomileyo Hayi - Ewe 2.8%
Iipalpitations Hayi - Ewe 1.9%
Uvalo Hayi - Ewe 1.4%
Olu alunakuba luluhlu olupheleleyo lweziphumo ezibi ezinokwenzeka. Nceda ujonge ugqirha wakho okanye umboneleli wezempilo ukuze ufunde okungakumbi ngeziphumo ebezingalindelekanga.
Umthombo: DailyMed ( Allegra ), Yonke imihla ( I-Allegra-D )
Ukudibana kweziyobisi neAllegra vs Allegra-D
Ii-Antacids kufuneka zithintelwe kwiiyure ezimbini ngaphambi okanye emva kokuthatha i-Allegra okanye i-Allegra-D. Ii-Antacids ezinjengeTum (calcium carbonate) okanye i-Alka-Seltzer (isodium bicarbonate) inokunciphisa ukufunxwa kwe-fexofenadine kunye nokunciphisa ukusebenza kwayo. Ijusi yamagilebhisi inefuthe elifanayo kwi-fexofenadine kwaye kufuneka ithintelwe ngelixa uthatha i-Allegra okanye i-Allegra-D.
Amachiza e-HIV afana ne-cobicistat anokunyusa ukugxila kwe-fexofenadine. Ukuthatha i-Allegra kunye ne-cobicistat okanye ii-antivirals kungakhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga ezandayo njengokuwozela okanye intloko. Amanye ama-antihistamines akufuneki ithathwe kunye neAllegra kuba zinokukhokelela nakwimiphumo emibi.
I-Allegra-D kufuneka ithintelwe ngelixa ithatha i-tricyclic antidepressants okanye i-monoamine oxidase (MAO) inhibitors. I-pseudoephedrine e-Allegra-D inokunxibelelana nala machiza kwaye ikhokelele kumngcipheko owonyukayo woxinzelelo lwegazi (uxinzelelo lwegazi) okanye ukubetha kwentliziyo okungaqhelekanga (arrhythmia).
Iziyobisi Iklasi yeziyobisi Allegra UAllegra D
Isodium bicarbonate I-Antacid Ewe Ewe
UNadolol IBeta-blocker Ewe Ewe
Ritonavir Intsholongwane Ewe Ewe
Idesloratadine Antihistamine Ewe Ewe
IPioglitazone Antidiabetic Ewe Ewe
Ijusi yamagilebhisi Ukutya Ewe Ewe
Rifampin Antimycobacterial Ewe Ewe
Posaconazole Ukubola Ewe Ewe
Wort eSt Amakhambi Ewe Ewe
Clomipramine I-Tricyclic yoxinzelelo Hayi Ewe
Hlaziya ngokutsha Uxinzelelo lwegazi Hayi Ewe
IPhenelzine Isithintelo se-MAO Hayi Ewe
Nxibelelana noochwephesha kwezolunye unxibelelwano olunokubakho ngeziyobisi.
Izilumkiso zeAllegra kunye neAllegra-D
I-Allegra kunye ne-Allegra-D kufuneka zithintelwe kwabo bane-hypersensitivity eyaziwayo nakwiziyobisi ezisebenzayo. Ngaphandle koko, la machiza anokubangela ukusabela okungafunekiyo njengokukhawuleza okanye ukukhathazeka ukuphefumla (anaphylaxis).
I-Allegra kunye ne-Allegra-D kufuneka ithintelwe kubantu abane isifo sezintso . Kuba i-fexofenadine icociwe emzimbeni ngokusebenzisa izintso, ukutshintsha kwezintso kunokukhokelela kumngcipheko wokunyuka kwetyhefu kunye neziphumo ezibi.
Ukusetyenziswa kwe-Allegra-D kunokufuna ukuthintelwa okanye ukubekwa esweni kwabo banexinzelelo lwegazi kunye nesifo sentliziyo. I-Pseudoephedrine isebenza ngokunyanzela imithambo yegazi ukunciphisa ukuxinana. Esi siphumo sinokunyusa umngcipheko weengxaki kwisifo sentliziyo.
Qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo malunga nezinye iindlela zokukhusela ngaphambi kokuba uthathe i-Allegra okanye i-Allegra-D.
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga neAllegra vs Allegra-D
I-Allegra ligama lophawu lwe fexofenadine. Isetyenziselwa ukunyanga i-hay fever (i-allergen rhinitis) kunye nemingxunya (urticaria) kubantu abadala nasebantwaneni. I-Allegra inokufumaneka kwikhawuntara kwaye iyafumaneka kwiitafilethi kunye nezinto ezingamanzi.
I-Allegra-D iqulethe i-fexofenadine hydrochloride kunye ne-pseudoephedrine. Ingathengwa ngaphezulu kwekhawuntara ukunceda ukukhulula iimpawu zokungabikho komzimba ezinje ngeempumlo ezibalekayo, amehlo anamanzi, kunye nokudibana kwempumlo. I-Allegra-D ifumaneka njengeyure ye-12 yeyure kunye neeyure ezingama-24.
Ngaba iAllegra kunye neAllegra-D ziyafana?
I-Allegra kunye ne-Allegra-D zombini ziqulathe i-fexofenadine HCl. Nangona kunjalo, ayililo ichiza elifanayo. I-Allegra-D iqulethe esinye isithako esisebenzayo esibizwa ngokuba yi-pseudoephedrine.
Ngaba iAllegra okanye iAllegra-D ingcono?
Zombini i-Allegra kunye ne-Allegra-D zisebenza ukunciphisa iimpawu zokungabikho komzimba. Kuba i-Allegra-D iqulethe into yokuthomalalisa eyongezelelweyo, kungangcono kwiimpawu ezithile ezinje ngokuxinana okanye impumlo exineneyo.
Ndingayisebenzisa iAllegra okanye iAllegra-D ngelixa ndikhulelwe?
I-Allegra inokusetyenziswa ngexa lokukhulelwa ukuba izibonelelo zingaphezulu kobungozi kumntwana. Ke ngoko, la machiza kufuneka asetyenziswe kuphela ngemvume yomnikezeli wakho wezempilo. Qhagamshelana nogqirha wakho ngaphambi kokusebenzisa i-Allegra okanye i-Allegra-D ngexesha lokukhulelwa.
Ndingayisebenzisa iAllegra okanye iAllegra-D ngotywala?
Ngelixa ukusela kotywala ngamanye amaxesha kunokuba kuhle ngelixa uthatha i-antihistamine yesibini-yesizukulwane, akuqhelekanga kucetyiswa. Utywala bungabangela iziphumo ebezingalindelekanga ezinje ngesiyezi okanye ukozela, enokuqiniswa nge-antihistamine .
Ngaba i-Allegra-D yenza ukuba ulale?
I-Allegra-D iqulethe i-fexofenadine, enokubangela ukozela. Nangona kunjalo, eli chiza liqulathe i-pseudoephedrine, eneempembelelo ezikhuthazayo kwinkqubo ye-nervous system (CNS). I-Allegra-D inokubangela ubuthongo okanye ingxaki yokulala kuxhomekeke kwimpendulo yakho kunyango. Xa kuthelekiswa ne-antihistamines yesizukulwana sokuqala, i-Allegra-D iya kubangela ukozela okuncinci.
Ngaba i-Allegra-D sisiyobisi esingaphaya kwekhawunta?
I-Allegra-D sisiyobisi esingaphaya kwekhawuntare esinokuthengwa ngaphandle kommiselo. Ngokomthetho womdibaniso, iAllegra-D igcinwa emva kwekhawuntara kwikhemesti. Unokufuna i-ID ukuyithenga kwaye kuya kubakho umda wokuba ungathenga malini ngosuku olunikiweyo.
Ngaba kufuneka ndithathe i-Allegra ebusuku okanye kusasa?
I-Allegra ingathathwa ebusuku okanye kusasa, kuxhomekeke kweliphi ixesha losuku oba neempawu ezimbi kakhulu. Ukuba ufumana iimpawu zokungabikho komzimba ebusuku okanye kusasa, ungazama ukuthatha i-Allegra ngokuhlwa. Ukuba uhlangabezana neempawu ezibi imini yonke, ungazithatha kusasa. I-Allegra iza kwitafile yeeyure ezingama-24 ehlala usuku lonke.
Ukulawula iilekese zaseHalloween kubantwana abanesifo seswekile
Amaxabiso e-insulin: Ixabisa malini i-insulin?
leliphi elona xabiso liphezulu le-ibuprofen onokulithatha
isiraphu sokukhwehlela sikuphakamisa njani
Wenza ntoni iviniga yeapile cider emzimbeni wakho
yomelele kangakanani i-tramadol hcl 50 mg
Umahluko phakathi kweevithamini d kunye neepilisi ze-d3